Oke Osimiri Mediterenian: njirimara, mbido, ihu igwe, ahịhịa na ahịhịa ụgbọ mmiri | Network Meteorology
El Oke Osimiri Mediterenian ọ bụ otu n’ime oké osimiri ndị mejupụtara Oké Osimiri Atlantik. Ọ dị na mpaghara nke sonyere na ndịda Europe, ọdịda anyanwụ Asia na ugwu Africa. A na-ahụta ya oke osimiri nwere oke mkpa akụkọ ihe mere eme maka ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ ebe ọ bụ mpaghara ebe ọtụtụ ọdịnala malitere. A na-ahụta ya nke abụọ kachasị ukwuu na mmiri dị na mbara ala, n'azụ Caribbean.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara, ọzụzụ na mkpa niile nke Oke Osimiri Mediterenian.
2 Nkeji nke Osimiri Mediterenian
4 Osisi na umu anumanu nke Osimiri Mediterenian
Oké osimiri a nwere nnukwu mmiri ma na-anọchite anya 1% nke oke osimiri niile dị n'ụwa. Olu ya nke mmiri bụ nke 3.735.000 cubic kilomita na nkezi omimi bụ mita 1430. Ogologo ya bụ kilomita 3860 ma nwee ngụkọta nke square kilomita 2.5. Mmiri a niile na-eme ka o kwe omume ịsa ahụ mmiri peninsulas 3 nke ndịda Europe. Ala mmiri a bụ Iberian, Italic na Balkan. Ọ na-asakwa ebe mmiri Asia nke aha ya bụ Anatolia mara.
Aha Osimiri Mediterenian sitere na ndị Rom oge ochie. N'oge ahụ Amaara m ya dị ka "Mare nostrum" ma ọ bụ "oké osimiri anyị." Aha Mediterenian sitere na Latin mgbasa ozi ihe etiti ụwa pụtara. Aha a sitere na mmalite obodo nke kpọrọ ya ebe ọ bụ naanị ha maara ala dị n'akụkụ oke osimiri a. Nke a mere ka ha were Oke Osimiri Mediterenian dị ka etiti ụwa. Site n’oge ochie, ndị Greek kpọrọ aha oke osimiri a rue taa.
Extremar jikọtara Oké Osimiri Atlantic site na Strait nke Gibraltar. Ọ dị n'etiti ndịda Europe, North Africa na ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ nke Near East. Oke Osimiri Atlantic abụghị naanị nkwukọrịta, kamakwa jikọọ na Oké Osimiri Ojii site na Bosphorus na Dardanelles Straits. Njikọ ọzọ nke njikọ ya bụ nke Oké Osimiri Uhie. Ọ na-ejikọ site na Suez Canal.
Nkeji nke Osimiri Mediterenian
Enwere ogologo ndepụta nke obere oke osimiri nke kewara Oké Osimiri Mediterenian. Onye obula kwekọrọ na otutu ala ma obu ebe ufodu ihe eji mara ya, ma obu ihe ndi ozo, ihe ndi ozo ma obu ihe omumu. Anyị ga-edepụta ndepụta nke ngalaba nke Osimiri Mediterenian nwere:
Osimiri Alboran, n’etiti Spain na Morocco.
Mar menor, n’ebe ndịda ọwụwa anyanwụ nke Spain.
La Mar Chica ke edem edere Morocco.
Oké Osimiri Adriatic, n’agbata peninshuan nke Italiantali na ụsọ oké osimiri Slovenia, Croatia, Bosnia na Montenegro.
Oké Osimiri Ionian, n’etiti ala mmiri dị n’ Italiantali, Gris na Albania.
Oke Osimiri Libya na Tunisia.
Oke Osimiri Kilikia n’etiti Turkey na Saịprọs.
Oke Osimiri Levantine, n'ụsọ oke osimiri Egypt, Lebanon, Saịprọs, Israel, Syria na Turkey.
Oke Osimiri Ligurian, n’etiti Corsica na Liguria.
Oké Osimiri Tyrrhenian, n’agbata ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ nke Sardinia, peninsula nke andtali na ụsọ oké osimiri Sicilian dị n’ebe ugwu.
Osimiri Balearic n'etiti ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ nke Peninsula Iberian na agwaetiti Sardinia.
Oké Osimiri Aegean, n’agbata Gris na Turkey.
Mgbe nkewa nke nnukwu kọntinent a maara dị ka Pangea, oghere mepere n'etiti Europe, Africa na Middle East. N’oge ahụ Oke Osimiri Mediterenian jikọtara ya na Oke Osimiri Atlantic ruo ihe dịka nde isii gara aga mgbe nsogbu nnu nnu nke Mesaịa ahụ mere. N'oge a oke osimiri kpọrọ nkụ n'ihi na e si n'oké osimiri wepu ya. Nke a mere ka emepụta mmiri ndị ọzọ na-enweghị ụtụ ọ bụla nke ga-etinye mmiri ọhụrụ na oke osimiri.
O nwere ike ịbụ na ọ gara n'ihu na-efunahụ mmiri, mana mbuze na-aga n'ihu nke ala mepụtara ọwa nke ihe dị ka kilomita 250 n'ogologo na mmiri sitere n'oké osimiri malitere ịsọ dị ka a ga - asị na ọ bụ ide mmiri. Ndị ọkà mmụta sayensị kwenyere na oghere nke emere site na ịwụ mmiri nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita 2 n'obosara nwere ike ijupụta Oké Osimiri Mediterenian dum n’ime ihe dị ka afọ abụọ. Mmiri mmiri a na ide mmiri nke mpaghara a niile gbanwere ọdịdị ala. Nke a bụ otú e si kee Oké Osimiri Mediterenian dị ka anyị si mara ya taa.
Banyere ihu igwe, anyị na-ahụ na ọ na-eweta oge okpomọkụ, akọrọ ma dị jụụ n'ozuzu. Ọ naghị abụkarị oké osimiri nke nwere oke ọgba aghara maka ịgagharị na ha na-enwekarị oge ọkọchị na ọkọchị. Mpaghara dum na-enweta ikuku ohuru nke na-esite na mbara n'etiti etiti ugwu nke Europe. Ifufe ndị a dị iche na ifufe na-ekpo ọkụ nke na-esite na mbara ọzara ma bụrụ nke Africa ma na-eme ka ikuku evaporation mmiri dị elu n'oge ọnwa na-ekpo ọkụ.
Ihe a niile na-arụpụta mmiri nwere oke nnu nnu na ikuku dị jụụ karịa. Anyị nwere ike ịtụle winters dị ka windier ma na a agafeghị oke e ji mara. Anyị na-ahụkarị ikuku na-ekpo ọkụ, akọrọ na ikuku na isi iyi na-adịkarị agbanwe ma jikọta ya na mmiri ozuzo.
Osisi na umu anumanu nke Osimiri Mediterenian
Banyere ihe ndị dị ndụ bi na mbara ụwa a, anyị nwere nnukwu nsogbu gburugburu ebe obibi. Ma bụ na a na-ahụta Oke Osimiri Mediterenian dịka otu n'ime mmiri metọrọ emetọ n'ụwa. Mgbe mmiri Australia, China na Japan, Oké Osimiri Mediterenian bụ otu n'ime oké osimiri, nnukwu ụdị ndụ dị iche iche n'agbanyeghị oke mmetọ.
Taa A kọwawo ụdị 17.000, nke 4% sitere n'oké osimiri ndị ọzọ, ya mere a na-ewere ha dị ka ụdị mmebi ahụ. Imirikiti ụdị anụmanụ na osisi na-etinye uche na mpaghara miri emi na mpaghara ndị dị nso na Strait nke Gibraltar. N'ebe a, anyị na-ahụ Osimiri Alboran, ụsọ oké osimiri Africa niile na Spanish na oke osimiri Adriatic na Aegean nke dị n'ebe ugwu.
Oké osimiri a na-ewere dị ka otu n'ime mmetọ kachasị emetọ n'ụwa dịka ọ nwere nnukwu ọnụnọ hydrocarbons na microplastics. Ihe abuo ndi a bu egwu di egwu na ndu nke osisi na anumanu. Enwere ike jikọta ya na ihe egwu sitere na ịkụ azụ na oke arịa.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Oké Osimiri Mediterenian.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Oke Osimiri Mediterenian